Wasaaradda caafimaadka oo dadka qaatay tallaalka COVID-19 ku boorrisay in ay sii taxaddaraan | Star FM
Home Wararka Kenya Wasaaradda caafimaadka oo dadka qaatay tallaalka COVID-19 ku boorrisay in ay sii...
Wasaaradda caafimaadka oo dadka qaatay tallaalka COVID-19 ku boorrisay in ay sii taxaddaraan
Wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa shakhsiyaadka laga tallaalay cudurka COVID-19 kula talisay in ay sii wadaan u hoggaansanka amarrada dowladda iyo talooyinka ka dhanka ah xanuunkan.
Wasaaradda ayaa xustay in shakhsiyaadkan si la mid ah dadka kale laga doonayo in ay isticmaalaan afduubka , gacmaha inay si joogto ah u dhaqdaan , in ay iska ilaaliyaan meelaha dadku ku badan yahay sidoo kalena ay ilaa 6 tallaabo isku jirsadaan qofka ugu dhow.
Wasaaradda caafimaadka ayaa shalay sheegtay in tirada dadka ee qaatay tallaalka cudurka COVID-19 ay tahay 487,278 qof.
Shakhsiyaadkan ayaa isugu jiro 118,833 oo ah saraakiisha caafimaadka , 39,523 oo ah ciidamada ammaanka, macallimiin dhan 70,338 iyo qaybaha kale ee bulshada oo gaaraya 258,584 ayna ka mid yihiin dadka da’doodu tahay 58 sano iyo wixii ka weyn.
Previous articleWasiirka waxbarashada dalka oo shaaciyay wakhtiga ay ardayda dugsiyada dib ugu laabanayaan
Next articleBukaannada qabo COVID-19 ee imaaraadka oo laga mamnuucay salaadaha taraawiixda